Akụkọ - chaja ikuku ikuku kacha mma maka 2021
Chaja ikuku ikuku kacha mma maka 2021
Ọ bụrụ na ebe nchekwa abalị gị jupụtara na eriri maka iPhone, AirPods, na Apple Watch, oge eruola iji eriri chaja ikuku na-emegharị ya. Ndị a bụ chaja naanị ekwentị na ọtụtụ ngwaọrụ kacha amasị anyị ka ọ dabara na mmefu ego ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado Apple, ọ ga-abụ na ị nwere drawer jupụtara na waya na ihe nkwụnye ọkụ maka ịchaji ngwaọrụ gị dị iche iche, ma ọ bụ tebụl ma ọ bụ ebe nchekwa abalị jupụtara na eriri maka ijikọ AirPods, Apple Watch na iPhone gị. Ọgbaaghara a n'usoro ekwekọghị na Apple si sleek, streamlined aesthetic. Ọ dabara nke ọma, na ịrị elu nke chaja ikuku, ọ bụ nsogbu dị mfe idozi.
Anyị ahọrọla chaja ikuku kachasị amasị anyị n'ọtụtụ ọnụ ahịa nwere ike ijikwa ihe ọ bụla site na naanị iPhone gị gaa na gburugburu ngwaọrụ Apple gị dum. N'agbanyeghị ngwaahịa Apple ị nwere ma ọ bụ ego ole ị ga-emefu, ị ga-ahụrịrị na ị ga-achọta azịza chaja ebe a nke mara mma karịa eriri ọkụ ọkụ na-acha uhie uhie.
Mpempe chaja ikuku nke LANTAISI TS01PU
Maka nrịgo elu na ọsọ nchaji, LANTAISI Wireless Charger Pad TS01PU nwere ụdị chaja Smart nke nwere ike ịhazigharị mmepụta na-akpaghị aka site na 5W ruo 15W. Ihe eji eme plastik na-eguzogide ọkụ na elu akpụkpọ anụ na-arụ ọrụ dị ka ihe mgbapụ - ihe akaebe mgbe ị na-ebufe ya, ọ na-ebufekwa ihe nkwụnye kwesịrị ekwesị maka iji iPhone gị, yabụ na ị gaghị achọ ịnye nke gị. Ọ bụrụhaala na ngwaahịa ndị dị n'ụlọ gị nwere ọrụ Qi, mgbe ahụ ị na-ekekọrịta chaja ikuku desktọpụ, dị ka iko ọkụ, brọsh eze eletrik, wdg.
LANTAISI Magnetik 4-in-1 chaja ikuku na-eguzo SW12
LANTAISI Magnetic 4-in-1 Ikuku chaja Stand SW12 bụ otu n'ime chaja ikuku dakọtara na MagSafe ọkacha mmasị anyị. Nkwụsi ike a na-eme karịa chaja iPhone 12 na ikuku ikuku: Ọ nwere ike ịgba ụgwọ ihe ruru ngwaọrụ anọ n'otu oge, na-ebelata njigide eriri, ma nwee ike iji naanị otu nkwụnye kwụọ ekwentị ezinụlọ dum, AirPods na iWatch.
Na a kacha ocha ọsọ nke 15W, ọ ga-adabara ọsọ site dị iche iche ngwaọrụ, na karịa na ị ga-enweta na ọkọlọtọ Qi wireless chaja. Ọ na-abịa na eriri Type-C nke nwere ụkwụ atọ. Iji nweta ọsọ nchaji MagSafe kacha ọsọ, n'ụzọ, ị ga-achọ iburu ihe nkwụnye 45W.
Lantaisi 3-in-1 Ikuku Nchaji Stand SW16
Lantaisi Wireless Charging Stand SW16 bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na-amasị gị iji iPhone gị na-ekiri TV mgbe ọ na-chaji. Ejiri akọ mee chaja ikuku ikuku 15W ka ọ chajịa ekwentị gị n'ụdị eserese ma ọ bụ ọdịdị ala. Enwere ike ịhụ LEDs abụọ ahụ n'agbanyeghị nghazi ekwentị gị ma mee ka ị mara ma ọ bụrụ na ihe ọzọ dị na nkwụnye ahụ. N'ihi na chaja ikuku anyị niile nwere ọtụtụ nchebe, dịka ọmụmaatụ , nchebe nke ugbu a, nchedo voltaji, nchebe okpomọkụ na mba ọzọ. ọrụ nchọpụta anụ ahụ, ọ nwere ike igbochi mmebi batrị akụrụngwa site na chaja karịrị. N'otu oge ahụ, ọ nwere ike chajịa ekwentị gị, AirPods na iWatch. Chaja ikuku 3-in-1, chekwaa oge iji chọta eriri data.
Anyị ka nwere ọtụtụ ngwaahịa imewe na mmepe iji webata, ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ndụmọdụ ngwaahịa ọzọ, biko kpọtụrụ anyị.
Oge nzipu: Ọktoba 27-2021